သားဆက်ခြား ထိုးဆေး - Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ
Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ > ကျွန်မတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် > သားဆက်ခြား ထိုးဆေး
သားဆက်ခြားထိုးဆေးဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိတာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ထိုးဆေးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါထိုးတာနဲ့ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းကို သုံးလထိထိန်းချုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သင့်အနေနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၃ လတိုင်းမှာတော့ ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) ဆေးခန်းသို့ သွားပြီးတားဆေးထိုးဖို့ လိုပါတယ်။ ထိုးဆေးမှာ ပရိုဂျက်စတင်ဟော်မုန်းပါဝင်ပြီး သားဥအိမ်မှသားဥတွေထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းမှာရှိတဲ့ အချွဲအကျိတွေကိုထူထဲစေပြီး သုတ်ကောင်တွေကို သားဥတွေဆီရောက်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်။
Source – http://bedsider.org/methods/the_shot#how_to_tab
သားဆက်ခြားထိုးဆေး အသုံးပြုတာကို တစ်ယောက်ယောက်က သိနေနိုင်မလား ?
သင်မပြောရင် သင်သန္ဓေတားထိုးဆေးသုံးနေတာကို ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီသားဆက်ခြားသန္ဓေတားနည်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေထဲမှာ တစ်ခုကတော့ဒီနည်းလမ်းက ဘယ်လောက်ထိ ဆင်ခြင်သတိရှိရတယ် ဆိုတာပါပဲ။
Source – https://www.plannedparenthood.org/learn/ask-dr-cullins/birth-control-qa
ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ထိုးဆေးမှာပါဝင်တဲ့
ပရိုဂျက်စတင်သည် သားဥအိမ်မှသားဥတွေ ထုတ်ပေးခြင်းကို
ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သားဥနဲ့သုတ်ကောင်တွေ မပေါင်းရင်
သုတ်ကောင်တွေ သားဥဆီရောက်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Source – https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-shot-depo-provera
သားဆက်ခြားထိုးဆေး ထိုးပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ယူရလဲ?
သန္ဓေတားထိုးဆေးဟာကြာရှည်ခံတာကြောင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် ၆လ-၁ဝ လထိထိုးပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အချိန်အကြာကြီးယူရပါတယ်။ သင်ဟာမကြာခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့စဉ်းစားနေရင် သင့်အတွက်ထိုးဆေးဟာ သန္ဓေတားတဲ့နည်းလမ်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုးဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတခုကတော့ တားဆေးထိုးတာရပ်လိုက်ပြီး နောက်ရာသီဓမ္မတာခွင်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ အချိန်ခဏလောက်တော့ ယူရပါတယ်။
တခြားဆေးထိုးသလိုမျိုး တားဆေးထိုးတာလည်း အတူတူပါပဲ။ ထိုးတဲ့နေရာမှာ ဆူးစူးသလိုမျိုးခံစားရပြီး နာကျင်မှုတွေ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။ ထိုးပြီးနောက်ထိုးတဲ့နေရာမှာ သွေးထွက်ရင် ရက်အတော်ကြာ နာကျင်မှုခံစားရရင် ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်စစ်ဆေးပါ။
သားဆက်ခြားထိုးဆေးကို အသုံးပြုရင် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်တိုးစေမှာလား?
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရထိုးဆေးသုံးတဲ့အမျိုးသမီး ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က အလေးချိန်တိုးလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးအများစု ၄ ယောက်မှာ ၃ ယောက်က အလေးချိန် တိုးမလာပါဘူး။ ဒါကြောင့် ထိုးဆေးသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးအများစုက အလေးချိန်ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်တာနဲ့ ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
Source – http://bedsider.org/questions/233-will-birth-control-make-me-gain-weight?tag=the_shot
သားဆက်ခြားထိုးဆေးက ဓမ္မတာချိန်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ?
အမျိုးသမီးအားလုံးနီးပါး ရာသီဓမ္မတာခွင်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သွေးဆင်းမှု၊ သွေးစက်ထင်ရုံမျှသွေးဆင်းခြင်း၊ သွေးဆင်းများခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ၆ လကြာပြီးနောက် အမျိုးသမီးအနည်းစုမှာ သွေးဆင်းများခြင်း (သို့မဟုတ်) မကြာခဏသွေးဆင်းခြင်းများ ကြုံတွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးအများစုမှာ ဓမ္မတာသွေးထပ်မဆင်းတာမျိုးလည်း ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ၁ နှစ်ထိအမျိုးသမီး ၇ဝ% ကျော်လောက် ရာသီဓမ္မတာခွင်ပျောက်သွားကြတယ်။ တားဆေးရပ်လိုက်ပြီးနောက် ၃ လ-၁ဝ လ ထိရာသီဓမ္မတာခွင် ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
Source – https://www.arhp.org/Publications-and-Resources/Quick-Reference-Guide-for-Clinicians/choosing/Injectable
သားဆက်ခြားထိုးဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ?
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သွေးဆင်းမှုသည်အဖြစ်အများဆုံး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်အသုံးပြုတဲ့ ပထမ ၆ လကနေ ၁၂ လထိဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုအတွက် ဓမ္မတာသွေးဆင်းချိန်ပိုနည်းလာပြီး သွေးဆင်းတာလည်းပိုနည်းသွားပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ ဓမ္မတာသွေးဆင်းချိန်ပိုကြာပြီး သွေးဆင်းနှုန်းလည်းပိုများပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ ဓမ္မတာသွေးဆင်းချိန်ကြားသွေးဆင်းမှု လျော့နည်းလာပြီး သွေးစက်ထင်ရုံမျှသွေးဆင်းတာမျိုးတွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေက ပုံမှန်ဓမ္မတာသွေးမဆင်းရင်ကိုယ်ဝန်ရှိလာ မှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြတယ်။ သန္ဓေတားထိုးဆေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲပါက အလွန်အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထနည်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမှာ လိင်စိတ်နိုးကြားမှုပြောင်းလဲခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်ပြောင်းလဲလာခြင်း (သို့မဟုတ်) အလေးချိန်တိုးလာခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမွှေးအမျှင်ထူလာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေအော့အန်ခြင်း၊ ရင်သားနာကျင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ရပ်တန့်ဖို့နည်းလမ်းမရှိပါဘူး-၁၂ ပတ်ကနေ ၁၄ ပတ်ထိထိုးဆေးအာနိသင်ပြယ်တဲ့ထိ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဆက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
သန္ဓေတားထိုးဆေးသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအဖို့ ယာယီအရိုးပါးတာတွေရှိပါတယ်။ ကြာကြာသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် အရိုးပါးတာကိုတိုးလာစေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေတားဆေးထိုးတာကို ရပ်လိုက်တဲ့အခါတဖန်အရိုးကြီးထွားမှု ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်မိသားစုမှာ အရိုးပါးရောဂါရာဇဝင်ရှိရင်အရိုးပါးတာရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုဆရာဝန်နဲ့ပြောကြားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ ကယ်ဆီယမ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီများများသုံးစွဲခြင်း ၊အစားအစာနဲ့ ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်စာများကို စားသုံးခြင်းဖြင့် အရိုးတွေကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်အောင် မလုပ်ပေးတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သားဆက်ခြားသန္ဓေတားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကြုံတွေ့နေရရင် သင်ပြသနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပြောကြားပါ။
Source – http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/contraceptive-injection.aspx
မကြာသေးခင်က မိခင်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေနဲ့ နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေသေးတဲ့ မိခင်လောင်းတွေအတွက် သားဆက်ခြားထိုးဆေးက ဘေးကင်းစိတ်ချရပါသလား?
မကြာသေးခင်က မိခင်လောင်းဖြစ်လာတဲ့သူတွေနဲ့ နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေသေးတဲ့ မိခင်လောင်းတွေအတွက် သန္ဓေတားထိုးဆေးကဘေးကင်းစိတ်ချရပါတယ်။
Source – http://bedsider.org/features/256-birth-control-for-breastfeeding-moms
ကြိုတင်ကာကွယ်နေထိုင်ဖို့ အတွက် ၃ လ တစ်ခါ တားဆေးထိုးရန် စီစဉ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးမွေးပြီး မကြာခင် သားဆက်ခြားထိုးဆေး ထိုးလို့ ရနိုင်ပါသလား?
ကလေးမွေးပြီး ခြောက်ပတ်လောက်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် တားဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးတာနဲ့ သင့်ရဲ့ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
Source – http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/when-contraception-after-baby.aspx
သားဆက်ခြားထိုးဆေး သုံးနေစဉ်အတောအတွင်း ဓမ္မတာသွေးဆင်းတာ ရပ်သွားရင် စိုးရိမ်ပူပန်သင့်ပါသလား?
စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ တားဆေးထိုးပြီး နောက်အမျိုးသမီးအများစုမှာ ဓမ္မတာသွေးဆင်းတာ ရပ်သွားကြပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဆေးပညာပြဿနာရပ်မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိတာလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ရာသီဓမ္မတာရပ်ဆိုင်းသွားတာသည် သားဥအိမ်တွေကိုအနားပေးလိုက်ပြီး သားအိမ်အတွင်းမှာ မကြီးထွားတော့တာကြောင့် ဓမ္မတာသွေး မဆင်းတော့ပါ။ တားဆေးထိုးတာရပ်ပြီး ၆ လ- ၁၈ လအတွင်း ရာသီဓမ္မတာခွင်ပြန်လည် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Source – http://youngwomenshealth.org/2011/07/01/depo-provera/
သားဆက်ခြားထိုးဆေး ထိုးထားတဲ့အတောအတွင်း အရိုးတွေအတွက်စိုးရိမ်သင့်ပါသလား?
သုတေသီများရဲ့ လေ့လာချက်များအရ တားဆေးထိုးထားတဲ့အတောအတွင်း ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ အရိုးသိပ်သည်းဆ လျော့နည်းသွားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ သင်ဟာ ၁၈ နှစ် (သို့မဟုတ်) ၁၈ နှစ်ကျော်သွားရင် တားဆေးထိုးးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့ ကယ်ဆီယမ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီကို မှီဝဲသုံးစွဲသင့်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းအများကြီးလုပ်သင့်ပါတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ အမျိုးသမီးအများစုမှာ တားဆေးထိုးတာရပ်ပြီးနောက် အရိုးသိပ်သည်းဆ တိုးတက်လာပါတယ် ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အမျိုးသမီးတွေမှာ အရိုးသိပ်သည်းဆလျော့နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ထိရောက်တဲ့သန္ဓေတားထိုးဆေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ နှိုင်းစာရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းရဲ့ စွန့်စားမှုရလဒ်တွေကို စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်မိသားစုသမိုင်းကြောင်းမှာ အရိုးပါးရောဂါရှိရင် သန္ဓေတားအချက်အလက်တွေကို ဆရာဝန်နဲ့ပြောကြားပါ။ အရိုးပါးရောဂါရှိတဲ့လူ နာတွေအနေနဲ့ အခြားသားဆက်ခြား သန္ဓေတားနည်းကိုသုံးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
လာမယ့်နှစ်မှာ သင်ကိုယ်ဝန်ရချင်ရင် နောက်ဆုံးအကြိမ် တားဆေးထိုးပြီးနောက် ၆ လကနေ ၁ဝ လ ထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် သားဆက်ခြားသန္ဓေတားထိုးဆေး မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုက်လုပ်တာဟာ ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ နှစ်အတော်ကြာ ကိုယ်ဝန်မရချင်ရင် သင်ကိုယ်ဝန်မရချင်တဲ့ မတိုင်ခင် ၁ နှစ်ထိသားဆက်ခြားသန္ဓေတားထိုးဆေးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။